နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ ဥပရောပခရီးစဉ် တစေ့တစောင်း
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ ဥပရောပခရီးစဉ် တစေ့တစောင်...
3 มิ.ย. 2562 - 18:29 น.
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ အန်ဒရီးဘားဘီးစ်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်တဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခု ခရီးစဉ်ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးသော ဥရောပနိုင်ငံတွေကို သွားတဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပဋိပက္ခအပြီးမှာတော့ နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်တွေကို ဟာအနည်းငယ် ကျဲပါးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်က ငါးရက်ကြာမှာဖြစ်ပြီး ချက်သမ္မတနိုင်ငံသာမက ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုလည်း ဝင်ရောက်လည်ပတ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံဟာ ဒီကနေ့ ဇွန် ၃ ရက်နေ့မှာတော့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ချားလ်စ်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ပါလီမန် မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
ချားလ်စ်တက္ကသိုလ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်နှစ် ၆၀၀ ပြည့်နှစ် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားမှာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ကို ရွှေတံဆိပ် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနေ့မှာတော့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံဟာ ချက်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် အန်ဒရီးဘားဘီးစ် ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးသောမက်စ်ပတ်ထရီဆက်တို့နဲ့ သီခြားစီတွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကတည်းက စီစဉ်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်ကို ပြန်လည်လက်ခံတာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ သူ့အနေနဲ့ထွက်လာဖို့ မလွယ်တဲ့အတွက် ခဏရွှေ့ဆိုင်းပါတယ်ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ချက်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကို အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေထက် ပိုပြီး ဆက်ဆံရေး ချောမွေ့နေတာကြောင့် အခုလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်မှုတွေ ကြားထဲက အတိုင်ပင်ခံက ရွေးချယ်လာရောက်တာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ချက်သမ္မတဟောင်း ဗားကလဗ် ဟာဗယ်ဟာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု အတွက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူဖြစ်ပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ရင်းနှီးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတစ်ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်က ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ ဟာဗယ်ရဲ့ အမွေအနှစ် Forum 2000 Confrence ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံကို ကြိုဆိုမှု အများအမြင်
ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံကို ရောက်ရှိစဉ်က ချက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daroslav Dolecez နှင့် တာဝန်ရှိသူတွေက ချက်နိုင်ငံ ပရာ့ဂ် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ကြိုဆိုမှုမှာ နိုင်ငံတော်အဆင့် မကြိုဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ကိုလင်းသန့်ကတော့ "တခြားခရီးစဉ်နဲ့ မတူတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အဖွဲ့ရောက်တဲ့အချိန်က ညသန်းခေါင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ အစကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတောင် ကြိုဆိုဖို့ စီစဉ်ထားကြတာ။ နောက်လေဆိပ်ထဲမှာ ကြိုဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က VIP ထွက်ပေါက်ကနေ ထွက်မှာဆိုတော့ ဒီက သံအမတ်ကြီးတွေပဲ သွားကြိုတာလုပ်ပြီး မနေ့ကမှပဲ ချက်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးတွေ ကြိုဆိုကြတာ ချက်နိုင်ငံ တယ်လီဗေးရှင်းတွေက ပြပါတယ် " လို့ဆိုပါတယ်။
အနာဂတ် မြန်မာနဲ့ အီးယူ
အီးယူနိုင်ငံတွေဘက်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး၊ သံတမန်ရေး စတဲ့ အဘက်ဘက်က အားနည်းနေမှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ချက်နိုင်ငံကနေ တဆင့် ပိုပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်သွားမယ်လို့ မနေ့က ချက်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ တွေ့စဉ်က သံတမန်နည်းကျကျ ပြောဆို သုံးနှုန်းတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကိုလင်းသန့်က ဆိုပါတယ်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံဟာ ဥရောပသမဂ္ဂမှာ တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် အခုခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းအောင် တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာတော့ ပရာ့ဂ်မြို့မှာ ကျင်းပမယ့် စီးပွားရေး ဖိုရမ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီဖိုရမ်ကို တက်ရောက်ဖို့ မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ရောက်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ ဥပရောပခရီးစဉ် တစေ့တစောင်း